Fikarohana famoahana intoxications
Vol. 16 No. 5 Fanosihosena mamo
Vol. 16 No. 6 Fanosihosena ara-tsaina
Vol. 17 No. 1 Fanonerana ara-tsaina sy ara-panahy
Vol. 16 JANOARY, 1913. Tsia
NY teny mahamamo dia ao amin'ny "Rakibolana mahazatra" izay midika hoe: "Ny zavatra mamo, na ny toaka; fahamamoana. Toeram-pientanam-po lehibe; mifaly, miakatra be fahatsorana. ”Ny fimamo dia voafaritra hoe" eo ambany fitarihan'ny toaka be loatra ka lasa tsy mahafehy fifehezana ara-batana ny vatan'ny olona sy ny sain'ny olona iray, ... aorian'ny fanararaotana ny fanararaotana ny herisetra, ny fifandirana ary ny filasiana. "
Ny fampidirana dia teny vita amin'ny lohahevitra na vatana, misy poizina, avy amin'ny teny latina. toxicum, na Grika, toxikon, midika poizina; ny prefix in midika hoe mandray ao na hamokatra; ary, ny tsofoka, tion, midika hoe fihetsika, fanjakana, na mpandraharaha. Ny fahazaran-drongony dia voalaza fa "ny asan'ny poizina na ny toeran'ny poizina." in manondro ny fidirana na ny famokarana ny "toekarena misy poizina."
Ny poizina dia voalaza fa "zavatra rehetra izay rehefa raisina ao anaty rafitra dia miasa amin'ny fomba tsy misy dikany amin'ny alàlan'ny hoe tsy mekanika, mikendry ny hahafaty na hanimba ny fahasalamana." Koa ny fisotroana dia ny fanapoizinana, na ny famokarana. fanjakana voapoizina; izay mety "miteraka fahafatesana na faharatsiana lehibe amin'ny fahasalamana." Ny fotoan'io dia miankina amin'ny habetsaky ny zava-mahadomelina nalaina na vokarina ary amin'ny fahaizana na tsy fahaizan'ny lalàmpanorenana hamonoana na hanohitra izany.
Ny teny hoe fahavetavetana dia tsy ampiasain'ny leksikon maoderina amin'ny heviny fotsiny fa mitondra alikaola na zava-mahadomelina, fa amin'ny fahatsapana malalaka kokoa, toy ny ampiharina amin'ny saina sy ny fitondran-tena. Ny hevitry ny teny dia marina amin'ny fampiharana ao an-tsaina sy ny fitondran-tena satria rehefa ampiharina amin'ny toaka. Eto, ny teny fimamoana dia hampiasana amin'ny heviny efatra.
Misy karazany efatra amin'ny toaka izay ananan'ny olombelona, ​​araka ny toetoetrany efatra: ny fampidirana ny toetrany ara-batana, ny toetrany ara-tsaina, ny toetran'ny sainy ary ny toetrany ara-panahy. Ny fahavetavetan'ny iray amin'ireo toetrany dia mety hiasa eo amin'ireo telo hafa. Ny endrik'ireo zava-mahadomelina dia sitrana amin'ny alalàn'ny toaka, ny fahazakana ara-tsaina, ny fimamoana ara-tsaina, ary ny fisotroan'ny fanahy.
Ampiasaina manondro ireto zava-pisotro efatra ireto dia ny dikan'ny teny hoe mamo. Ny poizina vokatry ny tsy manaitaitra na manakana ny fampiasana ny fitsipiky ny fiasan'ny vatana, ny sainy, ny fahaizany ara-tsaina na ny fahefany.
Ho an'ny tsirairay amin'ireo toaka efatra dia misy ny antony, ny toaka, ny fomba fivoarana, ny antony mahatonga ny fimamoana, ny vokatry ny toaka, ny faharetany ary ny famaranana.
Ny alikaola sy ny narkotika dia antony mahatonga ny fahazakana ara-batana. Ny zava-pisotro toy ny labiera, ales, divay, gins, rums, brandies, whisky, liqueurs, dia zava-pisotro izay misy ny fanahin'ny zava-pisotro misy alikaola. Ny fomba fanararaotam-piainana dia ny fisotroan'ireto zava-mahadomelina ireto na amin'ny alikaola, na ny fandraisana azy ireo ho fanina amin'ny sakafo. Misy antony omena ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola, toy ny fomba iray mahatonga ny fiaraha-mientana, mamorona fiaraha-miasa tsara, mampisy fihomehezana, manosihosy, manala voly, manome fahafaham-po, mamelona, ​​izany no miaro ny poizina, mampitsahatra ny olana. manaisotra ny fikarakarana malemilemy, manala ny alahelo, miteraka fanadinoana ny fahantrana, ary maharesy ny famoizam-po, ka mitombo herim-po izany, fa manaitaitra ny saina. Ny hafa indray, raiso ho an'ny fitiavana ny fihetseham-po vokariny, ary ny hafa noho ny fanafody natolotry ny dokotera.
Ny vokatry ny fisotroana dia aseho amin'ny fihetsika ara-batana, ny toe-batana, ny fisainana sy ny toetra ary ny sain 'ny olona; izay faritana amin'ny alàlan'ny karazany sy ny habetsaky ny toaka, ny toetry ny vatana izay mandany azy, ary ny fahaizan'ny saina miatrika ny zava-mahadomelina sy ny vatana. Araka ny toetoetran'ny olona tsirairay sy ny ambaratonga samihafa amin'ny fimamoana, misy fampisehoana hafanana, fahatsiarovan-tena, famporisihana ny fomba miaraka amin'ny volubility, argativeness, combativeness, boisterousness, quarrelsomeness of speech; ary nateraky ny fahaketrahana, fialan-tsasatra, fanodinkodinana, fahalemena, tsy fahatokisana ny gait, fahatsentsenana sy tsy fahatokisana amin'ny fitenenana, fanamafisana, toritrefitra, fahatokisana. Ny fihetseham-po dia miovaova amin'ny fahafinaretana malefaka sy ny herisetra, avy amin'ny fientanam-po lehibe ka mijaly sy ho faty.
Ny alikaola amin'ny alkaola rehetra dia manomboka mamokatra ny fiantraikany amin'ny konstanta manontolo ao amin'ny vatana raha vantany vao entina ao anaty kibo izy. Na hiteraka vetaveta avy hatrany na maharitra ela ny fianjerany dia miankina amin'ny fampifangaroana ny zava-pisotro sy ny proport ary ny herin'ny fanahy maha-toaka ao anaty compound. Miankina amin'ny famolavolana, misy fiantraikany voalohany amin'ny vatana na ny atidoha ny alikaola. Amin'ny toe-javatra rehetra, na izany aza, dia mihetsika mivantana amin'ny rafi-rafi-pitatitra, avy eo amin'ny tsiranoka ao amin'ny vatana, ny hozatra, ary tsy mamela ampahany amin'ny vatana tsy voan'ny aretina. Rehefa raisina amina habetsaky ny olona matanjaka ny vatany, izay tsara ny fahasalamany sy ny fandevonan-kanina, dia toa mahasoa ny vokatr'izany; farafaharatsiny, tsy misy fanelingelenana mijaly. Amin'ny alàlan'ny fampiasana maharitra sy mahazatra, na dia amin'ny ampahany kely aza, ary indrindra amin'ireo izay manana fahalemena malemy, maloto fitondran-tena maloto ary vatana tsy misy fatiantoka. Rehefa raisina voalohany, ny alikaola dia manentana azy amin'ny endriny kely. Amin'ny fatra lehibe dia mamoaka mamo; izany hoe, ny foibe sy mankasitraka dia mihetsika, mitroka ny volon'ireo serebrum. Ireo dia mihetsika ary mbola mitohy ny rafitra cerebro-spinal, paralysis ny rafi-pitatitra foibe, ny hozatra an-tsitrapo dia tsy mihetsika, mijaly ny vavony ary ailika ny asany. Ny ampahany amin'ny vatana tsy raiki-tampisaka sy ny paralysis kosa no ivon-toerana mandeha ho azy ao amin'ny medulla oblongata, izay mitantana sy mifehy ny mivezivezy sy ny fisongonany. Raha tsy misotro ny alikaola, mifarana ny vanim-potoana mamo, ny vatana no mamita ny asany, ny zony ary mety hanjavona ny vokatry ny toaka. Amin'ny alàlan'ny famamoana tafahoatra, na amin'ny alàlan'ny alikaola tsy an-kiato, dia matetika miharatsy ny rafi-pitatitra, tsy mahafaty na marary ny taova ary tsy mahavita ny asany mahazatra. Ny alikaola dia mahatonga ny fihenan'ny kelin'ny tsiambaratelo ao amin'ny kibony ary manamarina ny fiasa ataony ary manakana ny fandevonan-kanina. Manamafy ny atiny, manalefaka ny fo sy ny voa, miteraka fahasimban-doha. Raha fintinina dia manafoana ny lalàm-panorenana amin'ny alàlan'ny fihenan'ny lozika mifamatotra amin'ny fomba rehetra ny taova rehetra sy ny sela rehetra ao amin'ny vatana. Aorian'ny fahafatesana dia hita ny fisian'ny alikaola amin'ny tsiranoka rehetra ao amin'ny vatana. Mora mora foana ao amin'ny tsiranoka cerebro izany rehefa nanjavona any an-toeran-kafa ny dian-tsika rehetra; izay mampiseho ny fifandraisany manokana amin'ny rafi-pitatitra.
Mety tsy mahatsiaro ireo fiantraikany aorian'izay, ary miaraka amin'ny fahatokisan'ny soa avy hatrany dia mety ho an'ny marary azy ireo, ny dokotera no antony nahatonga ny fahavoazana tafahoatra. Maro ny dokotera no manisy alikaola amin'ny alàlan'ny endriny ho toy ny manaitaitra na manazatra, ary indraindray dia voalaza fa amin'ny endriny sasany dia mahatonga ra, manome hery, manangana ny vatana. Na izany na tsia, dia azo antoka fa ny alikaola nalaina ho fanafody dia namorona faniriana sy faniriana amin'ny zava-pisotro misy alikaola ao amin'ny vatana, ary ny marary matetika dia mivoana.
Ny fomba iray hafa mampitombo ny mamo dia ny famokarana be sy ny fivarotana toaka be ao ambanin'ny saron-tava izay antsoina hoe "fanafody patentina". Ireo dia voalaza fa manasitrana ny rehetra fantatra na heverina ho marary sy aretina. Ireo izay mividy ny fanafody azo antoka dia mahavita mamo, dia mino fa nahazo tombony tamin'ny vokam-panahy manaitra azy ireo izy ireo ary mividy bebe kokoa. Ny akora hafa amin'ny fanafody-ny rehetra dia matetika tsy hanimba. Fa ny alikaola ao amin'ny fanafody patanty dia mamokatra ny fiantraikany amin'ireo izay mampiasa azy, fa ny mpanao azy dia mikasa ny hanao izany. Izany hoe, miteraka fahazotoana sy faniriana amin'ny alikaola ao amin'io endrika io.
Ny fiantraikan'ny alikaola amin'ny alkaola dia miovaova amin'ny fahatsapana fahalemem-panahy amin'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahatsapana lehibe, ary avy eo mihena amin'ny fahatsapana tsy fahampiana. Ireo fanovana ireo dia mety harahin'ny tsirairay miadana na haingana. Misy hazavana feno fankasitrahana izay misidina amin'ny vatana ary mamorona fahatsapana mifanaraka tsara. Manjary mailo kokoa ny maso sy ny sofina. Ny tsiro dia mihinana. Misy fahatsapana faharesen-dahatra sy fahatsiarovan-tena izay manosika hikatsaka fifandraisana miaraka amin'ny hafa, fa raha tsy izany dia toe-tsaina, fahatoniana, fahatokisana sy fahatongavan-tsaina miaraka amin'ny faniriana hiala amin'ny hafa ary ho irery, na miaraka amin'ny fironana hanohitra ny toetra sy ny toetra ratsy. Misy ny fahatsapana hafanana, fahavononohana hanafintohina, fifandirana na hiady momba izay atao na lazaina. Ny fahatsapana aretina na ny harerahana dia tsapa. Toa mihetsika sy mifangaro ny zavatra manodidina. Mihetsika amin'ny onja malefaka ny tany, na toy ny ranomasina misamboaravoara. Tsy misy antoka ny halaviran-davitra. Ireo tongotra sy tongotra dia lasa lanja lehibe. Manjary mavesatra sy milomano ny maso, manjavona ny sofina. Mavesatra loatra ny lela, ary mandà tsy milaza zavatra. Very ny fahafaha-mamadika ny molotra; hazo izy ireo ary tsy hanampy amin'ny famoronana feo amin'ny teny. Tonga ny rendremana. Mahatsiaro mitarika ny vatana. Ny fotokevitra mahatsiaro tena dia tapaka ao anaty atidoha io ao anaty atidoha, ary misy ny fianjerana ao anaty tsy fahatomombanana sy maty. Ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina dia ny kibo, ny aretin'andoha, ny hetaheta, ny fandoroana, ny mangovitra, ny fo tazomoka, ny fahavetavetana mahatsiravina amin'ny fisainan'ny toaka, ny faniriana be loatra na ny hanoanana misotro zava-pisotro bebe kokoa, ny fivondronana, ny hetaheta, ny hadalana, antsoina hoe horohoro mahatsiravina, izay ifotonan'ny foto-pisainana mahatsiravina ao ambanin'ny toe-batana, izay ahitan'ny zavaboary tsy mampidi-doza na miafina, ny lalitra, ny bibikely, ny ramanavy, ny bibilava, ny bibilava tsy manadino, izay manandrana manenjika azy na manandrana mandositra miaraka kely na tsy miraharaha ny toe-piainana na ireo manodidina azy. Eto amin'ity fanjakana ity, ny olona mijaly dia mety hisarika sy hisintona ny lalitra eny amin'ny rindrina, na manenjika zavatra amin'ny rivotra izay tsy misy na iza na iza fa afaka mahita, miaraka amin'ny maso masiaka, mampihorohoro, na angamba izy, mangatsiaka sy matanjaka amin'ny tahotra , andramo ny hanenjika ireo zavatra manenjika azy, na handosirany ny zavatra hitany, mandra-pahatongan'ny faharesen-dahatra azy.
Ny vokatry ny alikaola amin'ny eritreritra, ny toetra, ny saina an'ny olona iray dia miankina betsaka amin'ny fahafahan'ny saina mifehy ny fampiasana azy; Saingy, na dia mahery aza ny saina, ny fanohizana ny fihinanana zava-pisotro misy alikaola amin'ny be dia be dia tsy azo ihodivirana intsony ny fiantraikany mitovy amin'izany. Tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny eritreritra sy ny toetra izany; ary, raha tsy hoe resy dia hanimba sy hampilefaka ny saina.
Eo ambanin'ny herin'ny toaka dia misy fiovana hafahafa toa hita ao amin'ny toetrany. Ny olona mangina sy tsara toetra no hivadika ho mpifaninana na demony, ary ny olona iray izay mazàna miresaka be sy manaitaitra dia mety malemy paika sy tsy mahomby. Eo ambany fitarihan'ny alikaola dia hisy ny sasany toy ny ankizy na ny babo toy ny tsy fahampiana. Ny sasany dia hanizingizina ny hitantara ny fiainany. Ny lehilahy sterner dia mety ho lasa fientanentanana sy herinandro mikasika ny hetsika manelingelina iray. Ireo maneso ny fivavahana sy ny endriny, dia mety manonona andinin-teny lavabe avy ao amin'ny soratra masina, manome tsy fitovian-kevitra momba ny foto-pinoana, hanavaka ny fombafomban'ny fivavahana na fankalazana ara-pivavahana ary manohitra ny antony sy ny faniriana ho masina, ary angamba ireo faharatsian'ny mamo. Eo ambanin'ny herin'ny toaka dia misy ny lehilahy mametraka ny fahatokisan-tena sy ny haja ny fiovana ho biby izay manome fanjakana maimaim-poana sy manosika ireo filan'ny filàna masiaka indrindra sy ny filan-dratsiny, ny firotsahan'ny fiekena maloto, ny fiheverana izay hampahatezitra ny mpiara-miasa aminy toa ny tenany amin'ny fotoana mahonena. . Eo ambanin'ny herin'ny famonoan-toaka sy ny heloka bevava hafa izay tsy azon'ny olona atao atao, ary mitondra alahelo sy fanimbana azy sy ny hafa.
Mampitsahatra ny fisainan'ny sasany ny alikaola ary manentana ny eritreritra amin'ny hafa. Misy mpanoratra sy mpanakanto sasany milaza fa manao ny asany tsara indrindra izy ireo rehefa eo ambanin'ny fitarihany; fa ireo ihany no vokatra mivaingana, eo ambanin'ny famporisihana ny alikaola. Ny fahazarana amin'ny fahazarana dia manimba ny fitondran-tena, mandoko ny eritreritra ary manimba ny saina. Ny karazana fisotroana tafahoatra hafa dia mety hiteraka fandrebirebena, mamoa olana amin'ny fianakaviana, manimba ny fahasalamana ary miteraka fahafatesana; fa ny fihinanana zava-pisotro misy alikaola fotsiny dia afaka manimba tanteraka ny tsy fivadihana sy ny fizahan-toetra, ny fanesorana ny làlan'ny haja sy ny fanajana ny tena, ny fanovana ny fahatokisana sy ny hatsaram-panahy ho mpamono olona sy ny mpangalatra ary ny famelan-keloka, tsy manam-pahatra amin'ny ratra amin'ny hafa, ary miteraka fahafaham-baraka sy mahamenatra. Ny alikaola ihany no nahavita nanararaotra ny lehilahy manan-karena sy kolontsaina ao anaty tatatra, ary avy eo, mihena, mampitraka ny masony ary maninjitra ny tanany tsy miangavy mba hangataka ny mpandalo ampy hividy zava-pisotro.
Ny antony mahatonga ny fahazakàna ara-batana amin'ny narkotika dia ny fihinanana opium, ganjah ( cannabis indica), bhang (cannabis sativa), ny variants amin'ireo dia amina mômba isan-karazany ary miaraka amin'ny zavatra hafa.
Ny antony nomena ny fahazoana narkotika dia ny hoe mampangina ny orona izy ireo, miala amin'ny fanaintainana, mamorona torimaso ary mamela ny mpanjifa miala amin'ny olana, mahita fahitana ary handre feo tsy mahazatra ary tokony hoentina izy ireo satria— tsy azo ampianarina io. Ny fomba azo hamoahana ny narkotika dia ny fanjifana amin'ny endrika pilina, drafitra, tsindrona, amin'ny fifohana sigara na fihinanana azy. Matetika ireo dokotera no mampiditra narkotika ireo izay lasa iharan'ny mamo tampoka. Ny fahafantarana ny fanirian'ny marary hanana vokatra haingana sy hahazoana fanamaivanana amin'ny fanaintainana, na hanome fahafaham-po ny faniriany amin'ny zava-mahadomelina dia nomen'ny dokotera na manome ny narkotika nefa tsy mandinika tsara ny mety ho vokatr'izany. Amin'ny alàlan'ny fanjaitra, ny pellet ary ny potony, ny dokotera sasany dia nivezivezy tamin'ny marariny ny laharana fiva amin'ny moraly isan-taona. Maheno ny vokatra mahafinaritra vokatry ny fifohana sigara, manana "namana", dia zatra ny fahazarana izay manandrana manandrana izany, mandehandeha, mahita ireo mpifoka sigara miaraka amin'ny lasaliny sy ny fantsony, noho ny fahalianana tsy misy dikany, na ny faniriana be loatra. fantsona iray, "iray ihany." Tsy ampy izany matetika. Ny iray hafa dia ilaina "hamokarana ny vokatr'izany." Tsy ny zavatra nantenainy no vokany matetika. Tsy maintsy mahazo ny vokatra antenaina izy. Mbola ataony indray. Noho izany dia lasa "mpamono zava-mahadomelina izy". Amin'ny fomba mitovy amin'izany, ny olona iray dia lasa zatra amin'ny ganjah, izay matetika mifoka. Bhang dia mamo, na mihinana toy ny tsiambaratelo, na raisina ho toy ny zava-pisotro amin'ny endrika malemy kokoa, antsoina hoe siddhi. Bhang dia tsy mahatsikaiky na hempiana indianina. Samihafa ny fiantraikany. Hashish dia ny ravina malefaka avy amin'ny cannabis sativa, dieny tsy mbola nivoha ny raviny, dia maina sy mifoka ny ravina. Bhang dia ny ravina nalaina aorian'ny fambolena, hosasana, mamafa ary mamo. Bhang tsy dia fantatra amin'ny fiteny andrefana amin'ny ankapobeny, fa voalaza fa fahita mahazatra any India. Ao no voalaza fa tokony hoentin'olona irery, na any amin'ny fivoriam-be voafidy, na amin'ny fetibe lehibe isan-taona - Durja Pujah.
Ny vokatry ny narkotika amin'ny vatana dia, manelingelina ny fandevonan-kanina izy ireo, mampitombo na mampihena ny fiterahana sy ny mivezivezy ary mamono ny hozatra na mahatonga azy ho maranitra. Opium dia mampihetsi-po ny vatana. Ganjah dia mety hihetsika toy ny excitant. Namorona fitoniana i Bhang. Ny vokatry ny fimamoan-drongony amin'ny ntaolo, ny fihenan'ny vatana sy ny fanokafan'ny saina hafa amin'ny zavatra tsy ara-batana, fa tsy mahazatra. Misy fahatsapana hafahafa sy manonofinofy, toy ny fandalovana ao anaty tranom-baravarana mifoha. Ny manodidina ny vatana dia mety hanitatra, mitambatra na mihalavitra amin'ireo seho vaovao hita. Vehivavy tsara tarehy, lehilahy tsara tarehy, mihetsika na miresaka amin'ny fahalalam-pomba. Amin'ireo zaridaina voaroaka izay mahafaly ny maso dia henoina ny mozika fanaovana fampakarana ary ny zava-manitra mahafinaritra dia manampy ny mahafinaritra. Izay manintona indrindra ny sainy dia manintona ny saina ho amin'ilay lohahevitra. Ny alahelo, languor sy malefaka dia avo kokoa amin'ny vokatry ny opium fa tsy amin'ny ganjah. Ganjah mazàna dia mahatonga ny olona tsy misaron-tava ho mavitrika kokoa noho ny vokatry ny opium. Ny fahatsapana vokatry ny Bhang dia fehezin'ireo mandresy amin'ny fotoana ahazoana azy io, fa ny avy amin'ny opium sy ganjah kosa matetika tsy mitovy. Amin'ny ganjah sy opium dia mitombo ny sensations. Amin'ny opium ny languor dia mitombo mandra-pahatongan'ny lohahevitra tsy mahatsiaro tena. Avy amin'ny tsy mahatsiaro tena dia mipoaka tsikelikely izy na miaraka amin'ny fahatairana. Ny mahafatifaty, ny fampakaram-bady, ny fahafinaretana matetika no mamadika. Raha tokony ho zavaboary lozom-po izay mandrisika azy na manaitra azy izy, dia fanitsakitsahana azy, maloto, vermin, ary zavatra mahatsiravina sy mahamenatra hafa, avy amin'ny fisian'izany izay tsy ahafahany afa-mandositra amin'ny alàlan'ny fakany ny narkotika indray. Angamba izy tsy voageja noho ny fahamaizana mirehitra na ny fanaintainana ny aretin'andoha ary ny tsy fahatomombanana ara-batana izay azony atondrony amin'ny alàlan'ny fatra hafa. Ny vokatr'ireo bhang dia tsy dia voalaza loatra, na dia mety manaisotra ny filàna; Eny, hisakana ny hanoanana izy; ary io koa, dia mety hiteraka fahatsapana fahabangana, tsy misy antony ary tsy misy ilana azy. Raha be loatra ny fatra iray, dia tsy hifoha ny mpanjifa.
Ny famoahana narkotika dia misy fiatraikany amin'ny fiheverana sy ny toetran'ny olona mankatò azy. Miaina fahalalahana sy fanentanana ny eritreritra sy ny filalaovana mahafinaritra, izay tsy misy olon-tsotra afaka manana azy amin'ny fomba mahazatra. Io eritreritra io dia mitaky elatra ary mamakivaky toerana toa tsy misy fetra, na aiza na aiza misy ary araka ny fanirian'ny saina, manorina rafitra, mameno ny tafika, manangana empira. Izy aza mamorona tontolo iray ary mamorona azy; eo amin'ireo rehetra ireo dia mampiasa hery majika izy ary hatao. Amin'ny alàlan'ny fahavetavetana narkotika dia mety ho lasa mpanjaka ara-bola ny mpitondratena ambany fanetren-tena ary mifehy ny tsenan'ny tontolo; mpivarotra tovovavy iray lasa mpanjakavavy, natrehin'ireo mpandray vola ary nankafizin'ny tovovavy; ny mpivezivezy tsy manana trano dia mety ho tompon'ny fananana betsaka. Izay mety ho eritreretin'ny eritreritra sy ny eritreritrao dia tena zava-misy amin'ny fimamoana narkotika.
Io fihetsika ao an-tsaina io dia miteraka fanehoan-kevitra momba ilay toetra izay mamita azy amin'ny andraikiny sy ny andraikiny eo amin'izao tontolo izao. Tsy mandanjalanja ny soatoavin'ny zavatra. Mizara eo anelanelan'ny vanim-potoana nahalotoana sy adidy an'izao tontolo izao ny fifantohana. Mihamaina ny feo fitondran-tena, na mety atsofoka amin'ny rivotra ny fitsipi-pitondrantena. Na izany aza, ny olona iray efa zatra amin'ny zava-mahadomelina dia afaka manandrana manafina ny fahazarany, dia ho fantatra amin'ireo izay mahalala ny toetrany. Misy ny fahafaham-po tokana, ny tsy fahatokiana, ny tsy fahatokisan-tena, ny momba ilay olona, ​​toy ny hoe mandeha any an-kafa ny fahatsapan-tena. Izy dia voamariky ny tsy fahatokisan-tena sasany, ary voahodidin'ny rivo-piainana na fofona hafahafa izy izay mandray ny toetran'ny narkotika izay ampianarany azy, ary toa ohatran'ny fadimandry izy.
Ny fiantraikan'ny bhang dia tsy mitovy amin'ny an'ny opium sy fady fa ny mpampiasa bhang dia mety hamantatra ny lohahevitry ny eritreriny alohan'ny hidirany. Eo ambanin'ny fitarihan'ny bhang, ny olona iray dia mety hanao resaka na hanao fiheverana. Saingy ny haitao izay eritreretiny na ataony dia hohalehibeazana, hitarina na hitarina amin'ny ambaratonga miavaka. Izay lohahevitra eritreritra rehetra dia azo jerena ara-tsaina ho toy ny taolam-paty ao ambanin'ny mikroskopika mahery vaika. Ny zavatra manodidina na ny sarin-teny manodidina dia hivelatra sy hoso-doko mifanaraka amin'ny fihetseham-po misy. Ny hetsika tsirairay dia toa misy lanjany lehibe. Ny fihetsiky ny tanana dia manarona fe-potoana lava. Ny dingana iray dia toy ny zato hakiho; minitra iray isam-bolana, iray ora isam-bolana; ary izany rehetra izany dia mety hitranga raha tsy tapaka amin'ny vatana.
Ny fiantraikany ao an-tsaina ao amin'ny fisotroana narkotika dia, manary ny fahatsapana soatoavina sy ny hevitra momba ny fampiakarana ny saina; rava izy io ary lasa tsy mandanjalanja, tsy afaka mirehareha amin'ny olan'ny fiainana, amin'ny fanatanterahana ny fampivoarana azy, fanatanterahana ny andraikiny na manatanteraka ny andraikiny amin'ny asan'izao tontolo izao.
Ny faharetan'ny zava-pisotro misy alikaola na narotika dia mety maharitra na vetivety ihany. Misy ny sasany izay, aorian'ny fiaretany fiantraikany tsy maharitra dia nandà ny hanavaozana azy ireo. Saingy matetika rehefa lasa zatra ny fahazarana iray ny olona iray, dia manohy ny andevony mandritra ny fiainana izy.
Misy fanasitranana sasany amin'ny alikaola, eo ambanin'ny anaran'ireo namorona azy, izay hanafoana ny faniriana zava-pisotro misy alikaola. Ny fitsaboana ny fanasitranana ny mamo zava-mahadomelina dia tsy mahomby matetika. Raha tsy misotro intsony ilay olona "sitrana" dia ho sitrana foana izy. Saingy raha tsy sitrana voalohany ao an-tsainy izy ary raha avelany hisaintsaina ny resaka fisotroan-dronono sy ny fiheverana ny fiheveran'ny fisotroany, dia hiteraka toe-javatra tsikera ny fisainan'ny fisotroana. ny sasany na araka ny fisainany manokana hoe: "maka indray." Avy eo, dia taitra ny hanoanana taloha, ary niverina ho any amin'izay nisy azy taloha.
Ny fanasitranana amin'ny alikaola na ny zava-mahadomelina dia mety hanome fanamaivanana sy fanampiana amin'ny fanasitranana, fa ny hany fanafody ny toaka ara-batana dia tsy maintsy atomboka sy apetraky ny eritreritra. Ao ny ady atao amin'ny fifehezana sy ny tsimatimanota dia tsy maintsy hiady hatramin'ny farany ary handresy, alohan'ny hahitana fanafody maharitra izany.
Ny fanahy izay mihetsika amin'ny alàlan'ny narkotika dia mitoetra ao amin'ny tokonam-panahy. Tsy avelany handalo mihoatra ny fanjakany ny foto-pisainana ao an-tsaina, na hahafantatra ny tsiambaratelony sy ny tsiambaratelony, mandra-pahatongan'ny nanaporofoany fa tsy nahataitaitra ny hetahetan'ny saina ary nianatra nifehy azy.
Ny fanahin'ny alikaola dia manampahefana ambony amin'ny lalàna. Izy io dia mijoro amin'ny sisintanin'izao tontolo izao. Mpanompon'izay mankato sy tompon'ny lalàna izy ireo ary avelany handalo ary hampandeha azy ireo rehefa fantany ary mahay mifehy. Fa masiaka, tsy masiaka ary lozabe, ho an'ireo izay manararaotra izany ary tsy mankatò ilay lalàna izay tsy maintsy arahin'izy ireo.
Amin'ny faran'ny volana Febroary dia hokarakaraina ireo endrika Intoxicants hafa.